Wararka – Page 32 – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Akhriso:-Diyaaradaha Mareykanka oo Duqeyn Ka Fuliyay Buuraleyda Golis
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in duqeyn ay ka fulisay waqooyiga Somalia gaar ahaan buuraleyda Golis oo ay ku dagaalamayaan Al Shabaab iyo Daacish. Mareykanka ayaa duqeyntaan fuliyey axaddii, waxa uuna sheegay inuu ku dilay seddex dagaalame oo ka tirsan Al Shabaab. Agaasime ku xigeenka dhanka howlgalada ee Africom Gen. Robert Huston oo shir jaraa’id qabtay ayaa sheegay in duqeymaha ka ...
Madaxweyne Donald Trump oo London Ku Wajahan, Dibad baxyo Laga Cabsi Qabo
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isniinta maanta ah u safraya dalka UK waxa uuna halkaas ku qaadanayaa booqasho rasmi ah oo qaadaneyso muddo seddex maalmood ah. Diyaaradda Air Force One oo ah diyaaradda sida madaxweyne Trump ayaa la filayaa in saacadaha soo socdo ay ka degto garoonka diyaaradaha ee magaalada London. Madaxweyne Trump ayaa lagu wadaa in maqribnimada caawa ...
Sarkaal Ka Tirsanaa Al-Shabaab oo Koonfur Galbeed Isku Soo Dhiibay+Sawirro
Sarkaal Ka Tirsanaa Xarakadda Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ibraahim Maxamed Aadan ( Ibarhim Boolis), waxa uu Al-Shabaab u qaabilsanaa, Maaliyadda iyo sirdoonka Degmada Bardaale ee Goboka Baay. Mas’uuliyiin ka Tirsan Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay goobta lagu soo bandhigay sarkaalkaan ayaa sheegay in uu xiriiro lasoo sameeyay sidaasna lagu soo dhaweeyay. Guddoomiyaha ...
Xukuumada oo Laamaha Amaanka Muqdisho Fartay in ay Adkeeyaan Amaanka
Ra’iisal wasaare ku-xigeenka dowlada somaliya mahdi maxamed guuleed ayaa xalay shir gudomiyay shirka dardar galinta Amniga Caasimadda oo lagu Qabtay Xarunta Taliska Qaybta Guud ee Gobalka Banaadir. Waxaana kasoo ka qaybgalay wasaarada amniga, Taliyayaasha ciidanka, gudomiyaha gobolka banasdir iyo xubnaha ku jira gudiga Amniga caasimada ee dhanka amniga kala shaqeeya lamaha amanka. Kulanka waxaa looga hada xaalada amni ee casimada ...
Dhageystayaal kusoo Dhawaada Warka Subax Radio Simba ee Magaaladda Muqdisho waana Subaxnimo Isniin ah Tariikhdana ay ku beegan Tahay 3-06. 2019
Puntland oo Cafis u Fidisay 121- Maxbuus Bisha Ramadaan iyo Ciidul-fitriga awgeed
Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland Ahna kusimaha Madaxweynaha Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa Cafis u fidiyey maxaabiis munaasabadda Bisha Ramadaan iyo Ciidul-fitriga awgeed.
Iska Hor Imaad u Dhaxeeyay Booliska iyo Kooxo Hubeysan oo ka dhacay Muqdisho
Iska hor imaad u dhaxeeyay Ciidamadda Booliska Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kooxo burcad ah ayaa caawa ka dhacay Degmadda Xamar Weyne ee Gobolka Banaadir. Kooxdaan burcadda ah ayaa la sheegay in ay dhac u geysan jireen shacabka dharka ciida ka soo doontay Suuqa Degmada Xamar Weyne. Taliye ku-xigeenka Ciidanka Booliska Somaliya Zakiya Xuseen Axmed oo qoraal soo dhigtay barteeda bulshada ...
Axmed Madoobe oo Diiday Talooyin ay usoo jeediyeen Beesha Caalamka+Dhageyso
Madaxweynaha Maamulka Jubba-land Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), ayaa lagu eedeeyay in uu diiday talooyin ay usoo jeediyeen Beesha Caalamka oo ku aadan doorashadda Jubba-land. Maxamed aadan Xuseen Oo kamid ah siyaasiyiinta Jubbland oo la hadlay idaacada simba ee Magaaladda muqdisho ayaa sheegay in Axmed Madoobe oo aaminsan yahay fikirkii ahaa “in kismaayo isagoo meyd watay uu soo galay,islamarkana uu ...
Dhageystayaal kusoo Dhawaada Warka Duhur Radio Simba ee Magaaladda Muqdisho waana Duhurnimo Axad ah Tariikhdana ay ku beegan Tahay 2-06. 2019
War Deg Deg:-Darawal Lagu Dilay Magaaladda Muqdisho
Askari ka Tirsan Ciidamadda Booliska Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa goordhaweyd Magaaladda Muqdisho ku dilay mid kamid ahaa darawaladda Ka xeeya gaadiidka dadweynaha ee Homey-ga loo yaqaano. Dilkaan ayaa ka dhacay Xaafada Saybiyaan Degmadda hodan ee gobolka Banaadir. Qof kamid ah dadkii goobta ku sugnaa ayaa idaacadda Simba u sheegay in askariga uu darawalka ku amray in uu gaariga kawado goobta ...
Page 32 of 1,830« First...1020«3031323334	»	405060...Last »